Ngwaahịa nke ọkara mmiri na-egbu mmiri maka Organic Fatịlaịza Suppliers na orylọ Ọrụ | YiZheng
Gịnị bụ ọkara mmiri Ihe ndinuak Machine?
Na Ọkara-mmiri Ihe ndinuak Machine bụ ọkachamara ndinuak ngwá maka ihe onwunwe na elu iru mmiri na multi-eriri. NaAkwa Mmmiri Fatịlaịza ndinuak Machine adopts abụọ-rotors rotors, nke ahụ pụtara na ọ nwere elu na ala-abụọ-azọpịa. Mgbe akụrụngwa nri site na elu-ogbo rotor maka ike ike-egweri, na mgbe ahụ na-gaa ala-ogbo rotor ịnọgide Mike n'ime ezi ntụ ntụ iru kasị mma urughuru nha maka ọzọ granulating usoro. Enweghi ntupu sieve na ala nke Ọkara-mmiri Ihe ndinuak Machine. Ya mere enwere ike gwepịa ihe mmiri ma ghara igbochi ya. Ọbụna ihe ndị a kwakọtara na mmiri nwere ike gwepịa ha, echegbula onwe ha maka ikpuchi ma ọ bụ igbochi. Na Ọkara-mmiri Ihe ndinuak Machine a na-ejikarị ya na mmepụta na nhazi nke fatịlaịza organic, ọ nwere mmetụta dị mma na akụrụngwa dịka nri ọkụkọ na acid humic.
Gịnị bụ ọkara mmiri ihe ndinuak Machine eji maka?
Ọkara-mmiri Ihe ndinuak Machine a na-eji maka ndinuak ndu organic compost gbaa ụka, mepere emepe ụlọ n'efu compost gbaa ụka, ahịhịa apịtị carbon, ime obodo ahihia, ulo oru organic n'efu nke ahịhịa, ozuzu anụ ụlọ na okuko nri na na
Njirimara nke Igwe ihe na-ehicha mmiri
1. Onye rotor nke Ọkara-mmiri Ihe ndinuak Machine ihe owuwu jiri ezi uche imewe & Ọdịdị. Na abụọ-oche pupụtara, ya ndinuak arụmọrụ bụ ugboro abụọ ka ndị ọzọ ndinuak igwe. Ihe ndị ahụ na-abanye n'akụkụ ngwepịa sitere na oghere nri, wee gwerie ya na ntụ ntụ dị mma.
2.It adopts elu-alloy ike-eyi hama. A na-akpụ mpekere hama ka ha kwere nkwa na ha siri ike ma yie uwe zuru ezu iji gbatịkwuo ndụ ọrụ.
3.The ogbe nke a fatịlaịza grinder na-welded site elu àgwà carbon ígwè efere na igbe ígwè. Ọ gafere usoro nrụpụta siri ike na nkwenye na usoro teknụzụ akọwapụtara.
4.The Ọkara-mmiri Ihe ndinuak Machine n'ihi na ire nwere abụọ n'ígwé nke egweri usoro-azọpịa ihe finely na inweta kacha arụmọrụ.
5.Adopting mgbanwe belt mbanye. Igwe eletriki na-ebugharị shea belt nke na-enyefe ike na isi isi, na-eme ka ọ na-agbagharị na nnukwu ọsọ iji kpochapụ ihe ndị ahụ.
Uru nke Igwe mmiri na-ehicha igwe
1) Wide ngwa na elu pụrụ ịdabere. Igwe a enweghị ala na ihuenyo, ya mere enwere ike gwepịa ihe karịrị 100 ụdị ihe na igwe agaghị egbochi.
2) Ndozi dị mfe. Igwe a na - anabata teknụzụ ụzọ abụọ. Ọ bụrụ na a na-eyi hama ahụ, mgbe ahụ enwere ike iji hama ọzọ mee ihe mgbe ọ kwagasịrị ọnọdụ ya.
3) Ezi ndinuak mmetụta. Igwe ahụ na-eji rotor nke nwere okpukpu abụọ, ihe mbụ a na-akụri n'ime obere irighiri wee gwerie ya na ájá dị mma.
4) Ọrụ ịzọpụta ọrụ, na ọrụ ahụ dị mfe. Ọ na-eji teknụzụ dị elu, ọ bụ naanị otu onye nwere ike ịrụ ọrụ dị mfe, ọ bụghị naanị na ọ dị mma ma nwee ntụkwasị obi, kamakwa ịkwado mmezi.
Egwuregwu mmiri na-egweri igwe Video Show
Ọkara mmiri Ihe ndinuak Machine Model Nhọrọ
Urughuru Size (mm)
Ọnụ ọgụgụ nke Short Hammer
130x50x5 = 70 iberibe
130x50x5 = 24 iberibe
180x50x5 = 32 iberibe
300x50x5 = 72 iberibe
Ọnụ ọgụgụ nke Long Hammer
180x50x5 = 36 iberibe
240x50x5 = 48 iberibe
350x50x5 = 48 iberibe
Ogologo × obosara × elu
Nke gara aga: Ugboro abụọ ịghasa Extruding Granulator
Osote: Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine